'लकडाउनको उल्लंघन गर्दै उहाँले जुलुस निकाल्दा कति जना थिए ? समस्या पार्टीमा होइन, प्रधानमन्त्रीमा छ' : मातृका यादव | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
access_time२०७७ साल श्रावण २० गते, मंगलवार ०६:३५ PM chat_bubble_outline Comments folder_open राजनीति
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका छन् । जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरुमा समस्या रहेको बताएपछि यादवले समस्याको नेतृत्व नै ओलीले गरेको आरोप लगाए ।
नागरिकखबरसँग कुराकानी गर्दै यादवले भने, 'कोरोनाको बाहाना बनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीमा छ । समस्या समाधान नगर्ने काम पनि उहाँले नै गर्नू भएको छ । समग्रमा समस्याको नेतृत्व नै ओलीले गर्नू भएको छ । पार्टीमा होइन, उहाँमा समस्या छ । लकडाउनको उल्लंघन गर्दै उहाँले जुलुस निकाल्दा कति जना थिए ?'
लकडाउनको उल्लंघन गर्दै देशभर प्रदर्शन गर्न लगाएको स्मरण गर्दै यादवले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि कोरोना संक्रमण माइतीघरकै प्रधानमन्त्रीको जुलुसबाट भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'देशभर लकडाउनको समयमा जुलुस निकाल्ने काम उहाँले नै गर्नू भएको हो । त्यो बेलामा जोरबिरोर पनि लागू थियो । माइतीघरको जुलुसले नै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कोरोना फैलिएको कुरा आएको छ । सरकार प्रमुखबाट नै नियम उल्लंघन गरिएको छ ।'
पार्टीमा देखिएको समस्यामा गम्भीर नबनेको भन्दै यादवले व्यक्ति ठूलो कि पार्टी भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, 'पार्टीको महाधिवेशन नभएसम्मका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च निकाय हो । बैठक उहाँ आफैले विधान अनुसार बोलाउनु पर्ने हो । बरु डिजिटल वा अन्य माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । उहाँमा देशको चिन्ता होइन, आफ्नो मात्र चिन्ता छ । त्यसैले बैठकबाटै समस्याको निकास दिनुपर्छ । व्यक्ति ठूलो कि पार्टी ?'
पार्टीमात्र नभएर प्रधानमन्त्री ओलीले देश नै बर्बाद पार्न लागेको टिप्पणीगर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता यादवले गरेका छन् । उनले भने, 'कम्युनिष्ट पार्टी विधिबाट चल्छ । उहाँ व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ । उहाँलाई सपोर्ट गर्नेहरु गैरकम्युनिष्टहरु छन् । किन कि कम्युनिष्ट सकियोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ । पाँच वर्षसम्म उहाँले नै सरकारको नेतृत्व गर्नूभयो भने पार्टी त बर्बाद पार्नू भएकै छ, अब देश नै बर्बाद पार्नू हुन्छ । उहाँ जुन पदमा हुनुहुन्छ, त्यो अनुसारको व्यवहार र बोली छैन ।'